Tantara mandaloPosté par Berïnson 2015-01-30 19:59
Lalana teritery, elakelan-trano zara raha misy hazavana no nitondrany ahy. Ny tanany fotsiny no nofihiniko mafy. Somary nitodika izy nijery ahy sady nitsiky kely. Nahazo toky ihany aho ka nanery ny foko nidobodoboka mafy mba hitony. Tsy misy tokony ahiako, hoy aho anakampo, raha mbola izy no eto anilako.
Nandeha efa ho folo minitra izahay namakivaky elakelan-trano, niampita arabe lehibe iray dia nanaraka fefy tambohon’olona isan-karazany. Indraindray fohy ny tamboho sasany ka miontana iray ihany ny foko isaky ny misy alikan’olona mivovò tampoka mitsamboatra miakatra ny vavahady.
- Fa tsy afaka miandry mazava ve ny dia alehantsika aty, ry Setra a?
- Efa kely sisa fa andao e. Raha miandry rahampitso mety ho efa tara loatra.
Maizim-bolana rahateo ny andro ka toy ny hoe hisy olona hifandona amin’ny tena foana isaky ny fiolahana. Nony farany, nijanona izy. Tohatra hazo kely sy varavarana namoaka hazavana mitsilopilopy amin’ny sisiny roa no manoloana ahy. Nitodika nibanjina ahy izy. Tsy hitako ny endriny ao anaty haizina fa ny feony no nahalalako fa tsy avy miaina mihetsi-po koa izy saingy manindry ny fihetseham-pony.
- Ny iangaviako anao fotsiny, ry Hanta an…
Tsy mba mpanao ahy ”ianao” na mpiantso ahy ”ry Hanta” i Setra. Na faly izy na tezitra dia ny “indry” ihany no mahavantana ny vavany.
- Hanta a, ny iangaviako anao dia…
- Inona e? Haingana fa efa alina ny andro. Izaho efa te-hiverina hody.
- Aza miteny n’inon’inona rehefa ato fa mihainoa fotsiny. Rehefa tonga any an-trano isika tantaraiko anao ny zavatra rehetra.
- Fa nahoana?, hoy aho, lasalasa ny vavako.
- Aza miteny fotsiny, ho’aho, hoy izy mibitsibitsika mafy.
- Eny àry e, fa ataovy haingana àry izay atao ato dia hody aloha araka izay azo atao isika.
- Tsy mino aho hoe tafody izao alina izao isika fa aleo rahampitso rehefa mazava ny andro vao mandeha.
Tsy faly aho saingy tsy afa-manoatra satria efa teo ka atao ahoana fa dia izay izany. Nisokatra moramora somary nidridry ilay varavarana teo alohanay. Aloka na vehivavy iray no nanatona nivoaka nampandroso anay.
- Hay ve efa ato ianareo e? Midira àry fa efa ianareo sisa no nandrasako anie e.
- Eny, tompoko, hoy Setra sady nisintona ahy teo amin’ny lantontanako hiditra hanaraka azy.
Izaho nanaraka fotsiny toy ny kofehy manara-panjaitra. Sady izay rahateo ny toromarika nomena ahy moa. Efitra iray tsotra dia tsotra, tsy misy fanaka firy, no nampandrosoana anay. Na labozia tokana mitsilopilopy aza no nanazava ilay efitra dia tazana tsara daholo ny tao anatiny. Akalana avoavo roa no efa niandry teo hipetrahanay. Ilay ramatoa nipetraka teo an-tongom-pandriana, ny tanany mihazona ny sisim-parafara. Tsy dia zokinjokiny araka ny naminaniako azy ilay izaho nahare ny feony tao an-tokontany ilay ramatoa fa tanora ihany. Raha misy dia misy io, 24 na 25 taona toa ahy ihany, hoy aho an’eritreritra.
-Niova ny programako, hoy izy mibanjina an’i Setra, sady hendry tsara koa izy androany, angamba efa fantapantany ka io efa vitako omana aloha io izy dia azonareo raisina.
Tsy nahita olon-kafa ankoatra anay telo aho ka gagagaga ihany saingy tsy sahy firy hitoditodika.
- Io ambony latabatra io ny taratasy rehetra araka ny resantsika aninkeheo, azonareo avadibadika rehefa tonga any an-trano ianareo, hoy ihany izy manohy ny teniny sady manondro molotra ilay latabatra kely teo alohanay.
Tonga dia nandray ny taratasy rehetra teo i Setra ka nampiditra azy tao anaty kitapony. Nitsangana ilay ramatoa nandray ilay harona lamba lehibe niankina tery amin’ny rindrina ankavanana sy nametraka azy teo an-tongotr’i Setra. Izy ilay nitsangana iny no nahitako tsara fa hay zazakely anaty lamba no nandry natory tao ambadiny saingy noheveriko ho lamba avy nosasana miandry hopasohana. Io zazakely io izany ilay noresahiny teo hoe hendry tsara ka vitany omana mialoha sy azonay raisina. I Setra no nojereko tsara avy hatrany. Ny lohany fotsiny no natodiny tamin’ilay latabatra kely tsy misy n’inon’inona intsony teo amboniny. Tera-tsemboka aho.
Nitsangana izy. Sady izay rahateo angamba no nandrasan’ilay ramatoa nijajirika teo tsy niteny, tsy nivolana intsony.
- Eny àry, tompoko, fa dia hiezaka handeha aloha izahay dieny tsy alina loatra.
Tsy namaly ilay ramatoa no sady tsy niala teo amin’ny nijoroany.
- Izaho no hitrotro an’i Aina kely sa indry?, hoy i Setra nitodika taty amiko.
- Aleo hotrotroiko izy dia ianao no mitondra ny entana mavesatra, hoy aho nitsangana moramora nanatona ny fandriana.
- Misaotra indrindra, tompoko, hoy ilay ramatoa amin’ilay feony hentitra nefa koa mankasitraka. Ny nataoko sa ny nataon’i Setra no nisaorany? Izay no tsy fantatro. Rehefa azoko antoka tsara fa voafihiko teo an-trotroana ilay zaza dia ninia nanatona azy aho. Ny lohan’ilay zazakely no nataoko nanakaiky azy.
- Hanoroka hanao veloma azy ianao?, hoy aho kendakenda tampoka toa tsy hahaloa-peo.
- Efa nifanao veloma teo izahay mianaka ka, hoy izy tsy nijery ahy akory fa ny takolak’ilay zazakely no nosafoiny kely.
Nitsiky mora izy avy eo sady nitraka nijery ahy. Tazako manganohano ny masony niampanga ilay tsiky teo amin’ny tavany. Notarihiko hivoaka ny trano i Setra dia niverin-dalana hody izahay.